Voalohany, fo poakaty
"Koa tiava an’ i Jehovah Andriamanitrao amin’ ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra . Ary ny faharoa dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao . Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo." Marka. 12:30-31.
Amin'ireo didy anankiroa ireo no itoeran'ny tombontsoa rehetra sy ny adidin'ny olona. Izay olona manao amin'ny hafa ny zavatra iriny mba hataon'ny hafa aminy dia hoentina amin'ny toerana izay hisehoan'Andriamanitra eo anatre­hany. Hahita sitraka aminy ireo. Tonga tanteraka ao amin'ny fitiavana izy, ary tsy zava -poan a ny fikelezany aina sy ny fivavahany. Mandray fahasoavana sy fafima­rinana tsy tapaka avy amin'Ilay Loharano izy, ary rehefa mampita maimaimpoana ny fahazavan'Anddriamanitra sy ny famonjena izy, dia mandray izany koa (...)
Fahavetavetana eo imason'An­driamanitra sy ny anjely masina ny fitiavan-tena. Noho io fahotana io, dia maro no tsy mahazo ny zava­tsoa izay azony hiravoravoana. Mijery ny fananany amin'ny maso feno fitiavan-tena izy, ka tsy tia ary tsy mikatsaka ny tombontsoan'ny hafa, fa ny azy ihany. Atsimbadiny ny baikon'Andriamanitra. Raha tokony hanao amin'ny hafa ny zavatra tiany hataon'ny hafa aminy izy, dia izy tenany ihany no manao aminy ny zavatra tiany hataon’ny hafa aminy, ary zavatra izay tsy tiany hataon'ny hafa aminy no ataony amin'ny hafa.
Ahoana moa no hitomboan tsika amin’ny fahasoavana? Azontsika atao amin'ny fomba tokana izany: dia ny fanafoanantsika ny izaho ao am-pontsika, ka anolorantsika ny fontsika amin'ny Lanitra, mba ho voavolavola tahaka an'i Kristy, Ohatra alain-tahaka. Afaka ny hanana fifandraisana amin'ny fantson'Ilay fahazavana velona isika; afaka ny ho velombelomin'ny andon'ny Lanitra isika, hahazo ny ranonorana mirotsaka amintsika avy any an-danitra. Rehefa manana ny fitahianAndriamanitra isika, dia afaka hahazo fatra be dia be tokoa amin'ny fahasoavany. Rehefa mianatra ny miaritra hahita Ilay tsy hita maso isika, dia ho voaova ho tahaka ny endrik'i Kristy. Tsy hampieboebo na hampisandratra antsika noho ny izaho ny faha¬soavan'i Kristy, fa hahatonga antsika kosa ho malely fanahy sady tsy miavona am-po.
Tsy hahatonga anao ho fatra­pirehareha, na hiantehitra amin'ny herin'ny tena, na koa hieboebo ny fitomboana amin'ny fahasoavana, fa vao mainka hahatonga anao hahalala ny maha-tsinontsinona anao, sy ny fiankinanao tanteraka amin'ny Tompo.